…त्यसपछि बे’हु’ला म’ण्ड’व उ’ठे’र भित्र ग’ए’का थिए…. – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/…त्यसपछि बे’हु’ला म’ण्ड’व उ’ठे’र भित्र ग’ए’का थिए….
मोरङ । मोरङ जिल्लाको केराबारी ७ स्थित नरकटे भन्ने गाउँमा बिहेको म’ण्ड’पबाटै उठेर बेहुलाले बेहुलीको आमा र बुवा दुवैलाई खु’कु’री प्र’हा’र गरी घा’ई’ते बनाएका छन्
उनले ज्या’नै लिने उद्येश्यले बेहुलीको आमा र बुवा दुवैलाई आ’क्र’म’ण गरेका थिए तर भा’ग्य’ब’स् उनीहरु बाँच्न सफल भए । बेहुलीका आमा बुवा त बाँचे तर कतिञ्जेल भन्ने कुरा हो । किनभने खु’कु’री’को आ’क्र’म’ण’बाट उनीहरु घा’ई’ते भएका छन् । अवस्था निकै नै ग’म्भि’र भएको स्थानियहरुको भनाई छ ।
यो घ’ट’ना आजभन्दा ५ दिन अघिको हो । स्थानियको भनाई अुनसार बिहे हुँदै थियो । सबैजना आ आफ्नै सुरमा थिए । बिहे सकिन केही समय मात्र बाँकी थियो । अचानक बेहुला आफ्नो ठाउँबाट उठे र सरासर माथि गए । बेहुलाको त्यस्तो व्य’व’हा’र देखेर हेर्ने जति जम्मै छ’क्क परे ।
जब बेहुला माथि गए तब उनले त्याहाँ गएर छ’प्पा छ’प खु’कु’री ले आफ्नै बेहुलीको आमा र बुवा दुवैलाई हि’र्का’ई र’हे । माथिबाट चिच्याएको आवाज आएपछि सबैजना दगुर्दै माथि गएर हेर्दा हेरी नसक्नु द’श्य भएको कुरा स्थानियले बताए ।
घ’ट’ना भएको आज ५ दिन भईसकेको छ । आजसम्म पनि प्रहरीले बेहुलालाई समातेको छैन स्थानिय भन्छन्,‘हामी त अ’च्च’मी’त भईरहेका छौं । दिनदाहाडै बिहेको म’ण्ड’प’बाट उठेर सबैको सामुन्ने आफ्नै हुने वाला सासु र ससुरालाई हुनेवाला बेहुलाले खु’कु’री हि’र्का’ए’को छ ।
यो कुरा जान्दा जान्दैपनि प्रहरीले किन हो कु’न्नी दो’षी’लाई समातेको छैन ?’ यो समाचार तयार पार्दासम्म बेहुलीका घा’ई’ते आमा बुवाको अस्थापताल उपचार भईरहेको छ । वास्तविकता जान्नकोलागी तलको भिडियोमा क्लिक गर्नु होला ।
भाग्य न्यौपानेका कसैले थाहा नपाएका भित्री कुराहरु सुन्दा कस्को मन रु दैन होला/सबै रहस्य र नालीबीली (हेर्नुहोस भिडियो)